Hargeysa)-Wasiirkii hore ee Hawlaha Guud ee Somaliland Cali Mareexaan, ayaa soo jeediyay in Miiska uu ku shaqeeyo madaxweyne Biixi loogu magac daro Fanaankii Maxamed Mooge Liibaan.
” 1855-Kii ayaa markab ay lahaayeen ciidamada badda Ingiriska oo la odhan jiray H.M.S Resolue ku xumaaday Jaziirada Baffin oo ku taal waqooyiga Canada. Waxaa soo badbaadiyey markab Maraykanku leeyahay.
Muddo ayuu markabkaasi u sii shaqaynayey ciidaamada badda ee Ingiriiska waxaanuu hawl gabay sanado ka dib.
Markii uu hawl gabay waxaa looxiisii laga sameeyey miis qurux badan, waxaanay boqoradii Ingiriiska ee Victoria hadyad u siisay madaxwaynihii Maraykan Rutherford B.Hayes sanadkii 1880 kii. Waxaa loo bixiyey Resolute Desk oo loogu magac daray markabkaa.
Madaxwaynayaal badan oo Maraykan ah ayaa ku shaqeeyey ilaa xiligaa, waana kaa hadda kuu muuqda ee yaala Ovel Office-ka ee Trump isku kala bixinayo.
Miiska sare wuxuu yaala qasriga madaxtooyada JSL. waana ka uu ku shaqeeyo madaxwayne Muuse Biixi.
Wuu cusub yahay aadna wuu u qurux badan yahay, waana mid ku soo jiidanaya markaad indhaha ku dhufato.
Wuuu noqon karaa taariikh, waxaynu u bixin karnaa halyey ka mid ah haldoorkeenii. Anigu waxaan ka fekerayaa Maxamed Mooge AHN. oo ahaa aqoonyahan, siyaasi iyo fanaan la jecel yahay. Waxa kale oo uu ahaa ninkii ugu hor goostay Sanadkii 1976 ayuu ka dhaaaqay xukunkii Siyaad Barre”.